वाणिज्य बैंकहरुको संख्या आधा घटाउँदै राष्ट्र बैंक, यी हुन् मर्जरको तयारीमा रहेका बैंकहरु ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैकिङ > वाणिज्य बैंकहरुको संख्या आधा घटाउँदै राष्ट्र बैंक, यी हुन् मर्जरको तयारीमा रहेका बैंकहरु !
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने नीति अगाडि सारेको छ । बैंकहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाएर चालु आर्थिक वर्षभित्रै वाणिज्य बैंकको संख्या आधासम्म घटाउने केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २७ छ । “बढीमा १३/१४ वटा बलिया बैंक भए पुग्छ भन्ने हाम्रो निर्क्यौल हो”, ती अधिकारीले भने । शुरुमा एउटै व्यावसायिक समूहले प्रवर्द्धन गरेका बैंकलाई एक आपसमा गाभ्ने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी छ।
ठूला बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पुरानै अजेण्डा हो । राष्ट्र ब्याङ्कमा डेपुटी गभर्नर भएका वेला पनि बैंकहरुको चुक्ता पूँजी रु. २ अर्बबाट बढाएर आठ अर्ब पु¥याउन अधिकारीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । राष्ट्र बैंकको पूँजी वृद्धिको निर्णयपछि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३२ बाट घटेर २७ मा झरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि एकाध महीनाभित्रै दुई ठूला वाणिज्य बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट आपसमा गाभिने सम्भावना बढेको छ । यी दुई बैंकका सञ्चालकहरुले बैंकलाई गाभ्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक छलफल र तयारी शुरु गरिसकेका छन् । “दुई–तीन महीनादेखि नै मर्जरको विषयमा छलफल गरिरहेका थियौं, राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि थप प्रोत्साहन गरेका कारण सकभर छिटै मर्जरको प्रारम्भिक समझदारी गर्ने तयारी छ”, हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले भने।
त्यस्तै, हिमालयन बैंकमा हिमालयका छोरा अशोक राणा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा छन् । लक्ष्मी बैंकको मुख्य प्रवर्द्धक खेतान समूहको पनि हिमालयन बैंकमा लगानी छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकलाई गाभ्ने नीति अगाडि सारिएको मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ ।-हिमालखबरबाट साभार
२०७७ साउन १६ गते १५:३७ मा प्रकाशित
भोलिदेखि दुई हप्तासम्म लकडाउन गर्ने निर्णय
के तपाई पनि सहभागी हुने हो त ? ७ दिने फोर्ड अप्पर मुस्ताङ एडभेन्चरमा
अब करको दर होइन दायरा बढाइनेछ : अर्थमन्त्री खतिवडा
बैंकले पारित गर्यो १९ प्रतिशत बोनस सेयर र एक प्रतिशत नगद लाभांश